MURUGO: Waa Kuma Xidiga Chelsea Ka Tirsan Ee Muddo Laba Sanadood Ah Uu Wakiilkiisu Lacag La'aanta Ku Gumaystay? Hooyadii Ayaa Waayihiisa Ciyaareed Badbaadisay. - Gool24.Net
MURUGO: Waa Kuma Xidiga Chelsea Ka Tirsan Ee Muddo Laba Sanadood Ah Uu Wakiilkiisu Lacag La’aanta Ku Gumaystay? Hooyadii Ayaa Waayihiisa Ciyaareed Badbaadisay.
Shaqsiyaada ciyaartoyda kubbada cagta aduunka wakiilka ka ah ayaa ah kuwo mararka qaar daynstayaal ah isla markaana dhiig miirato ku noqda ciyaartoy da’yar ah oo ay masuuliyadooda hayaan.
Xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Talyaaniga ee Jorginho ayaa soo bandhigay sheeko xanuun badan oo ku kalifi gaadhay in uu gabi ahaanba kubbada cagta iskaga tanaasulo kadib markii uu wakiilkiisii dhiig miirato ku noqday.
“Wakiilkayga ayaa lacagta iska qaadanayay, aniga waa la burburiyay” ayuu Jorginho ku shaaciyay sheekada xanuunka badan ee uu kaga hadlay qaabkii uu kubbada cagta uga dhex bixi gaadhay markii uu da’yarka ahaa.
Jorginho ayaa shaaciyay in wakiilkiisii markii uu da’yarka ahaa uu isaga ku qasbay in muddo 18 bilood ah uu ku qasbay in uu mushaar ahaan u qaato €20 yuro wuxuuna Jorginho oo 15 sano jir ahaa uu soo maray dhibaato wayn.
Jorginho oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Brazil ayaa shabakada rasmiga ah ee kooxdiisa Chelsea waxa uu u sheegay: “Waxaan ka ciyaarayay tarta Brazil ah, waxaa i soo arkay aniga wakiil. Aniga iyo cyaartoy kale ayuu noo qaaday iskuu kubbada cagta ah oo 200 kilomitir u jiray halka aaan waqtigaas ku noolaa, halkaas laba sanadood ayaan ku soo qaatay”.
Sababta uu wakiilkani Jorginho iyo ciyaartoyda kale uu iskuulka u geeyay ayuu Jorginho ku sharaxay: “Waxay fikradu ahayd in uu u adeegsado in uu ciyaartoyda ku eego isla markaana qof kasta oo in ku filan u fiican uu Talyaaniga geeyo. Taasi waxay ahayd wixii uu igu sameeyay markii aan 15 sano jirka ahaa”.
“Waxa uu ii diyaariyay tijaabo in aan ku joogo kooxda da’yarta Verona wayna i qaateen. Sababtoo ah waqtigaas Verona waxay ku jirtay Serie A, may haysan koox da’yar ah, sidaa daraadeed, waxaan u ciyaaray koox maxali ah oo da’yar ah oo loogu yeedhayay Berretti. waxay ka ciyaarayeen Serie C1/C2, laba sanadood ayaan taas ku sameeyay”.
Kadib Jorginho ayaa sharaxaad ka bixiyay sidii mushaar xumo loogu guumaystay wuxuuna yidhi: “Intii aan u ciyaarayay Berretti, waxaan la kulmay saaxiibkay reer Brazil ah oo la yidhaa Rafael kaas oo goolhaye ahaa. Saaxiib ayaan isaga la noqday. Waxa uu iga warsaday waxa aan samaynayay, muddada aan halkaas joogay, waxaan isaga u sheegay in aan todobaadkii ku noolaa €20 yuro oo kaliya”.
Jorginho oo waxa uu goolhayihii sameeyay ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxa uu yidhi: ‘Hal daqiiqo sug, waxaa jira wax aan saxnayn oo taas ku saabsane’. Su’aalo ayuu waydiiyay waxaana soo baxday in wakiilkaygu uu lacagta qaadanayay isla markaana anigu waxba kamaan ogayn wax walba oo dhacay”.
Markii ay halkaas sheekadu maraysay waxa uu Jorginho sheegay in uu ku fikiray in uu kubbada cagta gabi ahaanba joojiyo wuxuuna yidhi: “waqtigaas waxaan doonaayay in aan is dhiibo. Gabi ahaanba waa la iburburiyay. khaatiyaan ayaan taagnaa. Aniga oo ilmaynaya ayaan guriga wacay waxaanan hooyaday u sheegay in aan dalka ku soo laabanayo isla markaana aanan doonayn in aan kubbada cagta sii ciyaaro”.
Maxay hooyadii ugu jawaabtay Jorginho? “waxay tidhi: ‘ Xataa taas ha ku fikirin, aad ayaad ugu dhawdahay, halkaas dhawr sanadood ayaad joogtay, kuuma ogolaan doono in aad guriga ku soo laabto, waxaad u baahan tahay in aad halkaas joogto oo aad is adkayso’, sidaa daraadeed waan sii joogay”.
Ugu danbayn Jorinho ayaa imtixaankii lagu dhiig miirtay ka baxay wuxuuna shaxda kooxda verona jabiyay sanadkii 2011 kii wuxuuna kooxda ku soo qaatay saddex sanadood ka hor intii aanu Napoli ku soo biiray January 2014 kii.
Kadib waxa Jorginho ka mid noqday ciyaartoyda khadka dhexe ee Serie A ugu fiicnaa isaga oo Napoli shaqo layaableh kula soo sameeyay Maurizio Sarri isaga oo waliba sal u ahaa kubbada loo bixiyay Sarri-ball.
Laakiin wiilkii yaraa ee isaga oo 15 sano jir ah muddada labada sanadood ku dhaw 20 ka yuro mushaarka looga dhigay ee lacagta kale uu wakiilkiisu ka cunayay ayaa ugu danbayn ay Chelsea ku iibsatay 57 milyan gini wuxuuna Blues xagaagii hore u saxiixay heshiis shan sanadood ah.
Hadda Jorginho waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda milyaneerka ah ee lacagta badan ka qaata kooxda Chelsea wuxuuna halkaas ku soo gaadhay taladii hooyadii ee ahayd in uu dhibaatada u dhabar adaygo oo aanu Brazil ku labaan isaga oo is dhibay waxaana sidoo kale caawiyay goolhayaha uu sheegay ee sirtiisa in isaga la dulmiyay bixiyay.